Shahaadada Sare: West Baden | Martech Zone
Sabti, Noofembar 21, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Adam Yar
Ninkayga, agaasimaha hal abuurka iyo kartida badan ee Steve Nealy (ceeb aan xishood lahayn), iyo waxaan maalmo kooban ku qaatay toddobaadkan hudheelka taariikhiga ah ee West Baden Springs ee ku yaal koonfurta Indiana. Aan idhaahdo intaanan galin hilibka tan haddii aad ku nooshahay gudaha baabuur (ama xitaa dhaaf) hudheelkan iyo inta kale Dalxiis Faransiis Lick Springs oo aadan arkin (ama xitaa haddii aad aragtay), waa inaad soo booqataa. Waa qurux badan.
Sida suuq iyo istiraatiijiyad caan ah, waxaan aad ula dhacay fiiro gaar ah ay brand. Labada hudheelba waxay leeyihiin taariikh taariikhi ah oo ay ka mid yihiin booqashooyin ay soo maleegeen madax noocyadooda kala duwan leh, oo ay ku jiraan Madaxweynayaasha Mareykanka, oo yimid hoolkan lagu cayaaro horaantii 1900-naadkii. Dhawaan ayaa lagu soo celiyay bilicdooda asalka ah, iyaga kama dhaafeyn faahfaahinta hoosta ka xariiqaysa walxaha taariikhiga ah ee astaanta iyada oo la daboolayo baahiyaha socotada casriga ah. Tusaale ahaan, gaarsiinta wireless-ka ee West Baden Springs Hotel oo dhan waxay ahayd mid bilaa camal ah. Uma baahnin in aan bixiyo shilimaad dhiig ah ama aan bixiyo $ 10 maalintii si aan ugu saxiixo. Kaliya waa inaan ogolaado shuruudaha isticmaalka hal mar oo macmacaankeyga yar ee MacBook Pro ayaa la aqoonsaday waqti iyo markale dhismaha.
Waxa ugufiican dhamaantiis, istiraatiijiyadda astaanta calaamadayda qalbigeedu wuu kululaaday ansaxinta korsashada joogtada ah waxaan kala kulmay markasta. Qof kasta oo shaqaale ah oo aan xiriir la sameynay wuxuu ahaa safiir hadlaya oo astaan ​​ah. Mid walbana wuxuu soo bandhigay waxoogaa taariikhi ah taariikhda wuxuuna aad ugu faraxsanaa inuu na tuso hareeraha sidoo kalena si dhadhan leh u soo jeediyo talooyin dheeri ah si aynaan u seegin waxyaabaha u muuqda kuwa aan dhammaadka lahayn ee waxyaabaha la sameeyo.
Waan sii wadi karaa oo waxaan ka sii wadi lahaa faahfaahinta badan ee isku xidhay sumaddan sifiican loo qabtay. Ujeeddadaydu waxay tahay inay ku shaqeynayaan shaqo cajiib ah astaantooda, iyadoo laga dhex raadinayo qodobo kasta oo la taaban karo iyo kuwa aan la taaban karin si loo xoojiyo cidda ay yihiin iyo waxa ay u taagan yihiin. Kaliya kuma aysan sameynin kahor iibka ama goobta iibka. Waxay noogu sharfteen sumadda ka dib iibka… iyagoo isu dejinaya suuqgeynta fayraska, iibsashada soo noqoshada iyo qiimaha macaamilka inta uu nool yahay oo dhan. Waxay umuuqataa inay cashar kujiraan dhamaanteen.
Waxaan ka tagay nasasho, sixran iyo diyaar u ah in aan ku soo laabto fursadii ugu horeysay ee ugu macquulsan. Sumcadda quruxda badan, West Baden Springs Hotel iyo Faransiiska Lick Springs Resort. Bravo!
Tags: brandingekspertenhotelgalbeed baden
Nov 28, 2009 at 7: 01 AM
Waad ku mahadsantahay wadaagida tan. Dhowr sano ka hor, waxaan u shaqeeyay Cook Medical oo ka baxsan Bloomington. Shirkadda ayaa ku qabatay (oo ay u maleynayaan inay weli sameynayaan) xafladdeedii sanadlaha ahayd ee West Baden. Dhismuhu waa mid cajiib ah. Markaad booqato, hubi inaad waliba gasho barxadaha iyo jardiinooyinka. Xaqiiqdii waa u qalantaa safarka.